Oromo News 03/19/2021 | KWIT
Siouxland District Health talaali corona virus torbaan dhuftu kana keessa Tyson kennamu haala guddaan bakka sadihiiti baayisu akka karoorfate jiru himan. Hanga ammaati beelama qabachuun akkuma itti fuffeti jira.
Kuni kanumaan osoo jiru, jiraatoni Dakota County nama umriin isaani 50 fi sanii ol tae talaali isaanitif akka malatteesu qaban himan. Deparmantiin mana Fayyaa Dakota County akka jedhaniiti jiraattoni websayitii kanasenuun taree is anii egachuu nii danda’uu, iniis vaccinate.ne.gov.
Virus haarawa Covid-19 kan U-K keessati argamee ture amma akka Winnebago, Nebraska akka seenu jiru himan. Ogeeyonni deparmatii fayyaa kan biraa Siouxland keesatille nama biraa kan qabame himanii jiran.
Garaagarumma ummata keessa jiru wajjiin ogeeyyoni fayyaa seera bareeda kan sirraahe haguugi fuula, addaan fagachu, harka dhiqachuu fi yeroo hundaa qulqulina ufii eegachuu barbaachisaa akka tae himanii jiru.
Akkasumas jarrii waa’e talaali covid-19 kan biraa kan kennamu yoo tau fi namoota dhukubichan qabame wanni muraasni qofni kan irrati mulattuu yoo tau fi du’uudhaf baaye sadarka xiqqaa akka qaban himan. Hanga ammaati nama umriin isaani wagga 16 fi sanii ol kan ta’an jiraattoni Winnebago parsantii 59% kan tau talaali jalqaba akka fudhatanii jiran himan.